Chitha ubusuku ngesitayela esihle - I-Airbnb
Chitha ubusuku ngesitayela esihle
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguCarolin
Indawo yam yokuhlala ilungele izibini, abahambi ngezoshishino, iintsapho (ezinabantwana), kunye nabahlobo abanoboya (izilwanyana zasekhaya).
Ibafanele kakuhle abafundi abasafunda umsebenzi kwi-BPL. Iofisi eseHirschfelde inokufikelelwa ngemizuzu eyi-10-15 (ngaphantsi nje kwe-8 km) ngemoto. Iivenkile ezinkulu zinokufikelelwa kwindawo esembindini (iAldi inokufikelelwa ngemizuzu emi-3 ngeenyawo, eKaufland ngemizuzu eyi-15 ngeenyawo)
Rhoqo ngeMigqibelo iinkonzo ziqhutyelwa kumgangatho osezantsi wendlu yethu (ukususela nge-9:30 kusasa ukuya kweye-12:00 p.m.). Oku kuthetha ukuba kwelinye icala uvuka emva kwexesha xa usiva amanqaku epiyano okuqala kwaye kwelinye icala kufuneka ube nolwazelelelo kwizinyuko, njengoko kungxola noko.
Ngenxa yendawo yethu esembindini, unokuhamba uye kumbindi wesixeko malunga nemizuzu eyi-10 kunye nesikhululo sikaloliwe malunga nemizuzu engama-20-25. Ngemizuzu embalwa usekuqaleni kwe-Weinaualle entle - kufanelekile ukuba uhambe apha uye kwi-Weinau Park ekufuphi (enechibi lenqaba, indawo yokutyela kunye ne-zoo). Ngoko ke ilungele abancinci nabadala.
Umbuki zindwendwe ngu- Carolin
Ndiyahlalisana kwaye ndiyathanda ukuchitha ixesha neendwendwe zam, umzekelo, ndibanike iingcebiso malunga nendlela yokuchitha ixesha labo lasimahla apha engingqini okanye ndifumane ikomityi yeti kunye nabo. Kodwa ukuba ufuna ukuba ngaphezulu kuwe, unamathuba amahle okuphumla apha - ndiyathanda ukuziqhelanisa nomntu ngamnye :)
Ndiyahlalisana kwaye ndiyathanda ukuchitha ixesha neendwendwe zam, umzekelo, ndibanike iingcebiso malunga nendlela yokuchitha ixesha labo lasimahla apha engingqini okanye ndifumane…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Zittau